‘यो मेरो अन्तिम पोष्ट हो’ लेख्दै कहाँ हराइन् रानी ? – Nayabook
‘यो मेरो अन्तिम पोष्ट हो’ लेख्दै कहाँ हराइन् रानी ?
भोजपुरी सुपरस्टार रानी चैटर्जी सोशल मिडियामा निकै नै सक्रिय रहने अभिनेत्रीको रुपमा चिनिंदै आएकी हुन् । उनका फ्यानहरुले उनको नयाँ नयाँ गतिविधीलाई हेर्नकोलागी पर्खि रहेका हुन्छन् ।
तर अब ती उनका फ्यानहरुलाई भने दुःखको म्यासेज दिएकी छन् रानीले । आफ्नो धेरै फ्यानहरुको मन दु-खाएर रानीले सोशल मिडियामा नआउने बाचा गर्दै रानीले अन्तिम पोष्ट गरेकी छन् । उक्त पोष्टमा रानीले आफुले सोशल मिडियाबाट ब्रेक लिएको बताएकी छन् ।
चाँडै नै नयाँ जोश र जाँगरका साथमा फेरी म आउने छु ।’ उनको यही पोष्ट अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै नै भाईरल
चाँडै नै नयाँ जोश र जाँगरका साथमा फेरी म आउने छु ।’ उनको यही पोष्ट अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै नै भाईरल भईरहेको छ । उनको यो पढेर उनका धेरै फ्यानहरुले उनलाई यस्तो नर्गन सुझाव दिएका छन् । अभिनेत्री रानीले किन अचानक यस्तो निर्णय लिईन् यो भने उनले खुलाएकी छैनन् । फ्यानहरूले भने निरन्तर उनको फ्लव गरिरहेका छन् ।